İmamoğlu: Mashruuca Kanal İstanbul Ma Noqon Karo 'Waan Sameeyay Mashruuca' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu: Mashruuca Kanal İstanbul Ma Noqon Karo 'Waxaan Sameeyay Mashruuca'
Anigu ma noqon karo mashruuca aan qabtay
Ekrem Imamoglu, Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul, ayaa booqday degmada 19-aad ee degmada Bagcilar. İmamoğlu wuxuu kajawaabay su’aalaha saxafiyiinta ee ku saabsan ajandaha inta lagu gudajiray baaritaanada uu kusameeyay Bağcılar
Imamoglu, saxafiyiin, telefishanka Madaxweyne Recep Tayyip Erdo onan ee Istanbul, haddii loo baahdo in la soo bandhigo su’aasha ku saabsan, “Muxuu yahay khudbaddii shalay ugu xiisaha badneyd, rabitaanka in la soo bandhigo. Aad ayey muhiim u tahay. Sababtoo ah, 'Waan sameynay, waan qabannaa, waan qabannay' ama 'Yaa raba, haddii uusan dooneynin; nama khusayso, waxaan qabannaa 'khudbadda, iyo sidoo kale khudbadan, khudbadda saxda ah. Waxaan rajeynayaa inay sidaas sameeyaan. Hadday i marti qaadaan, waan aadi doonaa. 'Albaabadeenu waa u furan yihiin qof walba' wuxuu khudbad ka jeedinayaa barnaamijka barnaamijka shalay. Haddii ay tahay on; Waxaan gaarsiinay inaan dooneynay inaan imaano albaabkaas. Maxaa yeelay waxaan u arkaa Kanal Istanbul inay tahay dhibaatada ugu daran ee Istanbul. Sida masiir ahaan, waxaan u arkaa inay tahay meel loo jeedo. Waxaan ku celinaynaa codsigan marka la eego dhageysiga fikradeenna. Fadlan ballan sameyso. Aynu kuu sheegno shaqsi ahaan waxa ku saabsan dayacyada uu abuuri doono isaga oo matalaya Istanbul. Mashruuca Kanal Istanbul, 'Waan sameeyay' mashruuca o-la-maz "ayaa ku jawaabay.
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul (IMM), ayaa booqday degmada 19-aad ee degmada Bağcılar. Duqa magaalada Bağcılar Lokman Çağırıcı wuxuu martigaliyay İmamoğlu iyo ğBB Xoghayaha Guud Yavuz Erkut xafiiskiisa. Imamoglu wuxuu caddeeyey inay kawada hadli doonaan dhibaatooyinka Bagcilar iyo Cagirici, oo ah duqa degmada Istanbul khibrad leh. waxaad ka heli doontaa jawaabaha su'aalahan. Waxaan jeclaan lahaa inaanan ku bixin maalin waxtar leh. Waxaan rajeyneynaa, inaan si dhakhso leh u dhameystiri doono dhamaan degmooyinka magaalada Istanbul. Kala badh ayaan helnay. Waxaan leenahay dhowr degmo. Laakiin waxaan rabnaa inaan ku maamulno geedi socodka annaga oo adeegsanayna isuduwid iyo isku dubbarid. Xal u helida ugu muhiimsan ee IMM waa degmooyinka degmada. Anigoo ah maayarka, xalka ugu muhiimsan ee lamaanahaaga ama wehelkayga, saamileeygu waa duqa degmada. Waxaan ku dhaqmi doonaa fahankan. Waxaan si daacad ah ugu shaqeyn doonnaa ahmiyada koowaad si aan u adeegno Istanbul ”.
CALAGIRICI: IZ HALKAANNA WAA KA SAMEEYAA DHAQANKA BASKA
Mr. Çağırıcı wuxuu uga mahadceliyay İmamoğlu iyo kooxdiisa booqashadooda wuxuuna cadeeyay in Istanbul ay tahay caasimada aduunka. Çağırıcı wuxuu yidhi, orum Waxaan aaminsanahay in magaalada noocaas oo kale ah, in adeegyo aad u wanaagsan la bixin doono si loo soo saaro xal wada jir ah oo ay la gasho IMM. Horey degmooyinka degmooyinka, oo aan ogahay sababta oo ah waxaan ka imid xilligaas, dhibaatooyin badan ayaan kala kulannay. Bacdamaa qorshaha degmooyinka ee degmadu uu ka duwan yahay, qorshaha degmada wuu ka duwan yahay, magaalo weynna waa ka duwan tahay. Tani waa inaysan ku dhicin magaalo weyn oo sidan oo kale ah; laakiin markaa had iyo jeer waa la saxay. Fursadahayagu waa inaad ka timaad degmada, saldhigga, waxaad ka timid duqa degmada. Waxaan aaminsanahay inaad si fiican noo fahmi doonto. Waxaan rajeyneynaa, inaan la kulmi doonno farxadda aan ugu adeegno Bagcilar, Istanbul, iyo tan ugu sarreysa, waa kan ugu wada mudan ee Eebbe abuuray.
Khudbadihii kadib, dhibaatooyinka Bagcilar ayaa laga wada hadlay hoolka halkaas lagu soo bandhigi doono. Imamoglu iyo maamulka sare ee IMM ayaa goob joog ka ahaa soo bandhigidda. Duqa magaalada Çağırıcı iyo maareeyayaasha degmada ee degmada ayaa u bandhigay soo bandhigida weftiga IMM. Soo bandhigida kadib, İmamoğlu iyo Çağırıcı waxay baaritaano ka sameeyeen dhismaha dhismaha cusub ee dowlada hoose iyo Feyzullah Kıyılık ee dadka Naafada ah. Labada madaxweyneba waxay wada aadeen dugsiga hoose ee Sancaktepe Primary School. Agaasime Selattin Ceylan'dan Imamoglu macluumaad ku saabsan dugsiga, wuxuu la kulmay barayaasha qolka macallimiinta.
“CHANNEL ISTANBUL, TAARIIKHDA ISTANBUL K
Imamoglu, ka dib wuxuu kajawaabay su'aalaha suxufiyiinta ee ajandaha. Ugu horreyn, "Shalay Mudane Madaxweyne wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah oo ku saabsan Kanal Istanbul. Waxay ka wada hadleen qaabka maalgelinta. Goor sii horaysay, Wasiirka Gaadiidka ayaa ka sheegay kanaal telefishan in lagu samayn doono qaab 'dhisid-ku-wareejin' moodel. Laakiin Madaxweynaha, "Haddii la helo, qaab-socod-wareejin-qaab wareejin ah, haddii aan la helin wuxuu ka soo bixi doonaa khasnadda," ayuu yidhi. Wuxuu sheegay inuu sameyn doono soo bandhig haddii loo baahdo. Ma raacday sharaxaadii shalay? Sideed u qiimeyn kartaa qaabkan maalgelinta? Imm Imamoglu wuxuu bixiyay jawaabta soo socota suxufiyiinta.
"Markii aan ogaado doodda moodeelada maalgelinta xitaa waa khalad. Turkey hore u leeyahay dhibaato deeq. Taas kama dhihi. Haddii aad weydiiso shirkadaha ganacsi ka sameeya hay'adaha dowladda, durba waad dhegeysan doontaa caqabadaha. Tani waa cabirka koowaad. Laakiin waxa ugu xiisaha badan ee khudbadii shalay ayaa ah rabitaanka in la soo bandhigo. Aad ayey muhiim u tahay. Sababtoo ah, 'Waan sameynay, waan qabanay, waan qabannay' ama 'Qofkii raba inuu wax na quseeyo, waanu qabannaa' marka lagu daro hadalada, khudbaddaani waa khudbadda saxda ah. Waxaan rajeynayaa inay sidaas sameeyaan. Hadday i marti qaadaan, waan aadi doonaa. Waxaan ku celinayaa codsigayga ballanta. Waxaan haystaa wax aan ka idhaahdo anigoo ku hadlaya magaca Istanbul. 'Albaabadeenu waa u furan yihiin qof walba' wuxuu khudbad ka jeedinayaa barnaamijka barnaamijka shalay. Hadday furan tahay, albaabkaas baannu ku dhaafnay. Maxaa yeelay waxaan u arkaa Kanal Istanbul inay tahay dhibaatada ugu daran ee Istanbul. Sida masiir ahaan, waxaan u arkaa inay tahay meel loo jeedo. Waxaan ku celinaynaa codsigan marka la eego dhageysiga fikradeenna. Fadlan ballan sameyso. Aynu kuu sheegno shaqsi ahaan waxa ku saabsan dayacyada uu abuuri doono isaga oo matalaya Istanbul. Waxaan leenahay aqoon isweydaarsi jimcaha. Waxaan casuunay dhamaan masuuliyiintii uu ka mid ahaa Mudane Wasiir. Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno dadka farsamada ah ee uu Madaxweynuhu u arko inay ku habboon yihiin. Markaa mashruuca Channel Istanbul, 'Waan sameeyay' mashruuca o-la-maz! Waa masiirka Istanbul, waa walaac muhiim ah, waxaana jeclaan lahaa inaan muujiyo aragtideyda wanaagsan ee ku aadan hadalada noocaan ah ee Madaxweynaha. Waxaan rajeynayaa inuu hadafkiisa gaaro. ”
Waxaan rabaa in aan codsado hambalyo marki naloogula taliyay salaada jimcaha ”
Imamoglu wuxuu yidhi, Mudane Madaxweyne, 'Waxaan arki doonaa badhasaabnimada markii wakhtigu yimaado.' Waqtigaas waxaad sameysay Julaay. Miyaad mar labaad codsatay? Ise,, dabcan waan haystaa. Codsi ayaan u gudbiyay. Aniga shaqsi ahaan waan gaarsiiyay. Waxaan ula jeedaa, markii aan soo marnay salaadda Jimcaha, waan sameeyay. Waqtigu wuu burqanayaa, waa iska cadahay. Maxaa yeelay waxaan la kulannay 30 badhasaab bishii Sebtember. Waa usbuuca ugu horreeya ee Janaayo. Afar bilood ayaa dhaaftay. Waxay ahayd arrin sharci ah. Wax kasta oo ku saabsan sharciga ayaa looga hadlay dadweynaha. Laakiin waan fadhiisan kari weynay oo aan ka doodi lahayn. Mudane Madaxweyne, wax sidaas oo kale ahi ma jiraan. Waxaa jiray Mudane Madaxweyne ku-xigeen iyo Wasiiro, laakiin nalooma casuumin. Tani waa tii ugu horreysay. Marka labaad, Hawsha Canal Istanbul ayaa si xawli ah u socota oo aan u baahanahay inaan la kulmo mustaqbalka dhow si aan u soo gudbiyo faahfaahinta geedi socodkan, oo aan u aragno gebi ahaanba mid taban. Toddobaadkan waxaan u gudbin doonaa codsigayga Mudane Madaxweyne qoraal ahaan Cumhurbaşkanı.
"Montreux, dammaanad noo ah"
Su’aasha ugu dambeysay ee la weydiiyay Imamoglu waxay ahayd, ünkü Montreux ayaa safka hore kaga jira hadaladii shalay. Waxaa la sheegay in kanaalkan uusan xiriir la laheyn Montreux, wuxuu ahaa kanaalka biyaha cusub. Maanta, Mevlut Cavusoglu, 'Waxaan lacag ka heli karnaa kuwa ka gudbiya kanaalada' ayuu yiri. Haddii aad u qiimeyso marka loo eego Montreux, sidee u egtahay ”. Imamoglu ayaa uga jawaabay su'aashan:
“Montreux waa heshiis Straits ah. Waa heshiis runtii muhiim ah oo qiimo badan oo ay kujirto amniga Badda Madoow si uun, gaar ahaan quseeya marinka walxaha ay ka midka yihiin maraakiibta dagaalka, kuwaas oo helaya xuquuqda marinka ee labada Dardanelles iyo Bosphorus. Dabcan, inkasta oo fikradaha iska indha tiraya heshiiskan markii hore la sheegay, haddana waxaa wax lagu farxo tahay in qaar ka mid ah wakiillada dowladda ay muujiyeen muhiimadooda xilli dambe. Sababtoo ah waa heshiis aad u muhiim ah oo qiimo badan. Markii ugu soo socdo ku dhawaad ​​boqol sano taariikhda iyo waqtiga ee Turkey ayaa la kulantay dhibaatada ugu yar ee Badda Madow. Tani annaga ayaa iska leh. Waxaan aaminsanahay in codsi kasta oo baabi'inaya dammaanadda noocan ah uusan sax aheyn. Kanal İstanbul ayaa Montreux u rogi kara marin-biyoodka oo dhibaato keeni kara. Haddii tani madaxa ku jirto, ka dib waxay u baahan doontaa faragelin quseysa Dardanelles, Eebbe idmo! Ilaahay ha ku barakeeyo labada dhinacba.
Aniguse waxan sameeyey
Mashruucyada Hawlaha Baaskiilka
Darawalka Metrobus, ma isticmaali kartid metrobus ayaan isticmaali doonaa
Yusuf Sünbül: Markii aan ahaa Young
Kocaoğlu: "IZBAN Enkazsa milkiilaha waa TCDD, waan ku ammaanayaa"